Shan Fonts oo kala duwan oo Google ah iyo waxa adeegsadayaashoodu u maleynayaan qorista | Abuurista khadka tooska ah
Haa waa run taas Google Faraha sameeya waxkeeda markay u baahan tahay inay ku soo jiidato isticmaaleyaasha noocyo kala duwan, laakiin markan waxay ku samaysaa daabacado xiiso iyo madadaalo leh oo qof walba jecel yahay, in kasta oo runtu tahay in noocyada badan ee ay leedahay ay aad u kala duwan yihiin mararka qaarkoodna ay adag tahay in wax la helo hufan oo ka mid ah noocyo badan.
Isku soo aruurintan waxaan kuu qabaneynaa shaqada adiga waxaanan kuu soo bandhigeynaa kuweena 5 nooc oo aad kahesho farta Google, Dare in la ogaado haddii aan kugu raacno.
1 Xaafadda font
2 Elite Gaarka ah
4 Kubbadda cagta
Nooc loo adeegsado xarfaha waaweyn, oo leh jilayaal hal abuur badan. Hawlgabkeeda aan caadiga ahayn ee dhumucdiisu midba midka kale ku beddelan yahay, waxay siineysaa hawo kala duwan oo asal ah, oo ku habboon in lagu muujiyo farriin ku dhajisan boosta ama cinwaanka websaydhka.
Sheekada lafteeda ku saabsan noocan caanka ah ayaa dhiirrigelin u ah Barrio oo ka timaadda daaqadaha dukaamada yar yar, daaqadaha dukaamada, cuntada guryaha lagu kariyo, hiliblayaasha tuulada iyo kuwa cagaarka cuna, iyo dalab iskiis ah oo ka yimaada iibiyaha damiir laawayaasha ah. Abuuraha wuxuu ahaa Sergio Jiménez iyo Pablo Cosgaya.
Elite Gaarka ah
Waa fikrad leh qaabka astaamaha makiinadaha qorista. Sidan oo kale astaamaheeda waxay u muuqataa inay ka soo baxayaan furayaasha, iyagoo siinaya a hawada guridda isla markaana casri ah.
Tan waxaa aad u adag in laga helo sheekada abuuristeeda iyo waxa ku saabsan dhiirrigelinta qoraaga, laakiin wax aan si fiican u caddayn, ayaa ah inaad ka heli karto shabakadda dhib la'aan.
Waa nooc ka mid ah "Xaafad joogto ahMaxaa yeelay waan ogahay shaqeeyaa mayúkafado.
Iyadoo leh hawo hal abuur leh oo aan daryeel lahayn waxay ku habboon tahay láanigaa iska leh ama si aan u soo jiito dareenkaón mar uun bogga websaydhka waana mid aan caadi ahayn oo astaamaheeda ka dhigaya mid aad u firfircoon. Bahiana waa far bilaash ah oo ay naqshadeeyeen Pablo Cosgaya iyo Dani Rascovsky sanadkii 2013.
Qaab-dhismeedkeedu wuxuu ku habboon yahay cinwaannada isku-dhafan iyo qoraallada gaagaaban, waxay bixisaa 490 glyphs iyo barnaamijkeeda OpenType wuxuu ka hortagaa calaamadaha in lagu celiyo marka la qorayo. Waxay taageertaa in ka badan 100 luqadood!
Xaaladdan oo kale waxaa na horyaalla far nooc qoraal ah oo leh hawo u eg carruur, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon xaalad kasta oo la xiriirta mawduucan.
Si kastaba ha noqotee, caruurnimadu kama weecinayso halista ama qoto dheer ee fariinta uu qoraalada Kranky isku dayayo inay sharaxdo, sikastaba, looma jeedin kaliya aaggan, laakiin qaabkeeda gacanta lagu sameeyay ayaa ka dhigaysa mid aad u badan.
Tani waa suurto gal aragtiónmás la mid ah kuwa kale taas oo aan hore uga soo hadalnay qodobkaan oo ku habboon qaabka "Qarqid”Kaas oo sii ahaanaya mid isbeddel ku socda 2017. Sidan oo kale waa ikhtiyaar u wanaagsan websaydhka, maxaa yeelay dad badani waxay hubaan inay marayaan xilliyadaas qorista iyo dhiirrigelinta
Gabagabadii, waxaan aqoonsanahay sida cajiibka ah ee ay tahay inaan awoodno inaan iyaga siino taas taabasho gaar ah oo gaar ah qoraalladayada.
Waxay leedahay in kabadan 600 oo qoys oo font noocyo kaladuwan ah waxayna kufiicanyihiin aqrinta shaashadaha blog-ka iyo guud ahaan boggaga shabakada, iyagoo ah ilo furan oo Google ay saarto faraheena, intabadan gacmaha u sheegñjecel yahay GRáficos iyo bloggers.
Sannado kahor tani macquul ma ahayn, maadaama ay ahayd inay naftooda ku koobaan noocyada fariimaha sida Arial, Times New Roman, Georgia ama Comic Sans. Way fududahay in la isticmaalo, maaddaama aad ka soo dejisan karto kombuyuutarkaaga ama aad si toos ah uga soo dejisan karto bogga ugu weyn ee Google Fonts. Wax walba waa arrin dhadhanka shaqsiyadeed ee isticmaalayaasha!
Ha u rumaysan taas habka xulashada fontía Way fududahay, maadaama inbadan oo ka mid ah ay caqabad ku noqon karto qof walba, laakiin si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal dabeecad oo ay ka wada siman yihiin, taasna waa inay raadiyaan inay la xiriiraan fikrad ama ay u gudbiyaan farriin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Shan Fonts oo kala duwan oo Google ah iyo waxa adeegsadayaashoodu ka leeyihiin qoraalka
Waad ku mahadsantahay inaad Bahiana iyo Barrio ku darto maqaalkaaga. Waxaan uga faa’iideysanayaa fursaddan inaan kula wadaago war: hadda waad ku raaxeysan kartaa nooc cusub oo labada nooc ah, oo hadda la socda kiis hoose. Sida had iyo jeer, shati u leh bilaash iyo adeegsi furan, xitaa mashaariicda ganacsiga. Waxaad kala soo bixi kartaa halkan: goo.gl/0aIFF1
Jawaab Pablo Cosgaya